Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Hey ọhụrụ! Kafe na-eme nke ọma na India
N'etiti ọrịa na-efe efe mebiri ụlọ ọrụ na-ere ahịa wee butere mmechi nke ọtụtụ ụdị azụmaahịa, Hey! Kafe apụtala nke ọma. Ihe ọ drinksụ drinksụ nke sitere na Indonesia mepere ụlọ ahịa 60 nke ọma na Indonesia kemgbe mmalite ya na June 2020 ma atọrọ ịgbasa ruo ụlọ ahịa 300 na njedebe nke 2022.
Hey! Kafe bụ ụbụrụ nke Edward Djaja, 26, onye guzobere Seven Retail, nke nwere ọtụtụ ụdị azụmaahịa na-abịanụ dị ka Golden Lamian, onye isi China Fast-Casual Chain nke Indonesia nwere ihe karịrị ụlọ ahịa 70 na Indonesia kemgbe ọ malitere na 2017.
"Lee na Hey! Kafe, North star metric anyị bụ otu-ụlọ ahịa ahịa ibu, nke na-enyere ika nweta stellar unit Economics. Obi dị anyị ụtọ ịsị na atụmatụ anyị arụpụtala oge nkwụghachi ụgwọ na-erughị ọnwa 12, nke bụ isi ihe dị mkpa maka anyị ịgbasa ngwa ngwa n'ụzọ ga-adigide n'afọ ndị na-abịa," Edward kwuru.
Lesa lekwasịrị anya na mmepe ngwaahịa na afọ ojuju ndị ahịa
Iji nweta metric kpakpando ugwu a, Hey! Kafe na-aga n'ihu na-etinye ego n'ichepụta na mmepụta ngwaahịa ọhụrụ. Site n'iji usoro mmepe ngwaahịa nyocha na sayensị, Hey! Kafe nwere ike ịnwale echiche ngwaahịa 20 kwa ọnwa. Nke a butere ọtụtụ ihe nchịkọta nhọrọ pụrụ iche na nke kacha ere, dị ka usoro Hey-Shake!, nke gụnyere Strawberry Heaven Hey-Shake na Choco-Cashew Hey-Shake, na ndị ọzọ.
Site n'ichepụta na ọnọdụ ya pụrụ iche, Hey! Kafe na-elekwasị anya n'ụzọ doro anya na-eto eto na puku afọ hip - ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu site n'afọ ndụ na Indonesia - dịka ahịa bụ isi. Na-enye ihe ọ drinksụ drinksụ dị iche iche nwere oke ọnụ ahịa dị ọnụ ala, Hey! Kafe na-ewu ewu nke ukwuu n'etiti puku afọ iri, na-ere ihe karịrị iko mmanya 12,000 kwa ụbọchị.
Nlereanya ọkụ nke akụrụngwa kwadoro site na teknụzụ
A na-akwado mgbasawanye ngwa ngwa nke ika ahụ site na ụdị ọkụ-akpa. Ọtụtụ n'ime ụlọ ahịa ika ahụ nwere ọnụ ụlọ kọmpat na-ebelata mmefu ego yana ịkwado ọrụ nnyefe Grab & Go. Ihe dị ka 70% nke ire ika nwere iwu nnyefe n'ịntanetị. Akara ahụ na-enyekwa ihe nlere mmekọrịta, dị ka nke na-eduga n'agbụ ụlọ ahịa dị mma na Indonesia.
Ụdị azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ ejidewo anya nke ndị na-etinye ego na-azụ ahịa, dị ka Trihill Capital, bụ onye kwadoro ụlọ ọrụ ahụ na gburugburu mkpụrụ. Site n'ịkwado ụdị ọkụ-ihe onwunwe, ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya ilekwasị anya na akụrụngwa na ịbawanye uru nke ika ahụ na itinyekwu ego na teknụzụ.
A na-eme atụmatụ ịmalite ngwa mkpanaaka n'ime ụlọ site na mbido 2022, iji nye ndị ahịa ha 350,000 kwa ọnwa ahụmịhe ahaziri iche na enweghị nkebi.